Hiran State - News: HS:- Mogdishu oo siweyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha mustaqbalka
HS:- Mogdishu oo siweyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha mustaqbalka
HS:- Abaabul xoogan oo maalmahan ka socday magaalada Mogdishu kaasi oo loogu diyaar garoobayey soo dhaweynta musharaxa madaxweynaha Jamhuuriyada federalka Soomaaliya Professor Warfaa ayaa siweyn looga dareemayey maanta magaalada Mogdishu.
Musharaxa oo maalmahan ku sugnaa magaalada Dubai ayaa ugu danbeyn ka dhoofay maanta oo jimco ah isagoona mudadii uu joogo Mogdishu halkaas kula kumi doona qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Musharaxa oo ay diyaaradii siday soo caga dhigatay barqadii maanta xiliga Mogdishu ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Mogdishu ku sugayey dadweyne aad u faraha badan oo iskugu jiray siyaasiyiin, haween iyo waxgarad kala duwan oo ka tirsan shacabka Mogdishu.
Professor Warfaa oo ay ka muuqatay kalsooni aad u weyn ayaa shir gaaban oo u kula hadlayey qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ku qabtay garoonka diyaaradaha kadibna waxaa loo soo galbiyey goobtii loogu talo galay inuu ka dego Mogdishu oo ay ku sugayeen waxgarad iyo dadweyne kale.
Sikastaba magaalada Mogdishu oo ah halka lagu wado iney ka dhacdo doorashada madaxweynaha jamhuuriyada federalka Soomaaliya ee talada la wareegi lahaa 5ta sano ee inagu soo aadan waxaa hada ku wada sugan musharaxiin badan oo qaarkood xilal sar sare ka hayaan TFGda hada jirta. ugudanbeyn doorashada soo socota ayaa waxaa isku arki doona musharaxiin fara badan oo midkasta is leeyahay isbedel ayaa dla imaan kartaa hadii aad talada dalka ku guuleysato.
Magaalada Mogdishu ayaa maanta aad looga hadal hayaa imaatinka Musaharaxa. mar aanu siyaabo kala duwan ula kulanay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee Mogdishu oo iskugu jiray kuwii soo dhaweeyey iyo kuwo ku sugayey goobta uu ka degan yahay magaalada Mogdishu ayaa inoo xaqiijiyey in uu Professor Warfaa ilaa hada yahay musharaxa kaliya ee ay ka dhab tahay inuu isbedel la taban karo u jiheeyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
La soco wararkeena danbe iyo safarka musharaxa madaxweynaha Soomaaliya.
· admin on April 20 2012 03:45:49 · 0 Comments · 2102 Reads ·
14,568,582 unique visits